Qoyska Wanaagsan | KEYDMEDIA ENGLISH
Waxaa Sanadahan danbe aad kor ugu kacay xaaladaha furitaanka, burburka Qoyska iyo dayacanka Ubadka, hadaba Qoraalkaan ka Aqriso Furayaasha Guusha Qoyska wanaagsan, tani waa qormadda Jimcadda ee arimaha Bulshada, Diinta & Suugaanta ee Keydmedia Online.
Balse waxaa jira qoysas badan oo Guurkoodii raandhiisay, ama sifiican uhirgalay, waxaana hubaal ah in Guurarka guulaystay ayna bilaash ku guulaysanin, balse uu katalaabsaday dhibaatooyin badan oo sababay in guurar kale oo isaga lamid ahaa ay burburaan.
Waxaa lawada ogyahay in marka lays shukaansanayo qofwaliba kudadaalo inuu muujiyo dhinacyada uu kufiican yahay, ama meelaha uu kaqurux badan yahay, si’uu qofka kale isu jeclaysiiyo.
Marka lays arooso kadibna si dhab ah ayaa laysu bartaa, qofwalbana waxaa usoo ifbaxa ceebaha qofka kale. Rabbina (swt) ma abuurin qof dhamays tiran, ee qofwalba meelo ayuu kaliitaa, ceebana ka leeyahay, hadaba waxaa haboon inaada beegsanin ceebaha iyo iimaha qofka kula nool ee aad fiiriso, dhinacyada uu kufiican yahay, ka qurxan yahay, kuna amaanto meelahaas isuu kuusii jeclaado. (Waqtiga shukaansiga indhahaaga aad uffur, Guurka kadibna indhahaaga nus xir, nusna fur, si’ay nolosha qoysku uhoramarto).
Majirto nolol qoys oo kamaran dhibaatooyin laxiriira is faham la´aan ama is eedayn, balse khatarta ugu xumi waa; Beenta, hadal isdaba marinta, Runta oo yaraata iwm. Taasina waxay keenaysaa inay kalsoonidii yaraato, shakigu bato, wax lakala maqli waayo, halkaana waxaa kabilaaban kara khatar kutimaada jiritaankii qoyska. Hadaba Beentu waa xaaraan, waxayna keentaa Shakki, kalsooni dhumid, waana bilowga xumaan oo dhan, Runtuna waa raaxo, kalsooni, xasilooni iyo raalli gelin Rabbi (swt).
Danaha Guurka waxaa kamid ah inay labadii qof ugutaan baahidoodii Jacayl sixalaal ah oo raaxa leh, hadii taa lawaayana, dhibaato ayaa bilaabata. Inuu qofkii dareemo inaan baahidiisii ladaboolin ama aan lajeclayn, halkaana waxaa kabilaaban kara fikir xun iyo in lakala niyad jabo. Taasina waa khattar burburisay bururin kartana Guryo fara badan, waxaana lama huraan ah inuu qofwaliba ogaado inay waajib kutahay, xil adagina kasaaran yahay daboolida baahida jacayl ee lamaanihiisa.
Waxaana Xaq ah inuu qofwaliba isu qurxiyo, isu carfiyo, hadalka umacaaneeyo, kana taabto meelkasta oo lamaanihiisu ku farxayo, si’uu jacaylkoodii usii kobco, usii adkaado. Haduu taa kagaabiyana wuxuu noqonayaa qof dayacay waajibkii saaraa, kana gaabiyay xilkii ilaalinta ama adkeynta jiritaanka qoyska wanaagsan.
Bani aadam kasta wuxuu ubaahan yahay inuu helo ama barto hadallo macaan oo uu dadka kula hadlo, si’uu Bulshada ula qabsado, meel fiicana uga helo. Qoyskaaga iyo Lamaana-haaga ayaana ugu wanaagsan wax hadal macaan lagula hadlo, nasiib darro Bulshada Somalida way ku yartahay adeegsiga luqada jacaylka, qaarna waxayba u arkaan wax laga xishoodo. Hadaba waxaa loo baahan yahay in aad loo adeegsado, kalmadaha: Waan ku jeclahay, waan kaa helay, waan kuu riyaaqay iwm, si’aad lamaanahaaga qalbigiisa farax iyo jacayl ugu dhaliso, reerkaagiina meel fiican ugaarsiiso.
Sidoo kale waa in labadiyo: Salaanta, shuminta, salaaxida, soo dhaweynta iyo ficil kasta oo sii adkaynaya jacaylka lamaanaha. Taasina waa Xaq uu Rabbi (swt) faray, waxaana kujirta maslada Qoyska, Bulshada iyo Ummada oo dhan, maxayeelay markasta oo reer Muslim ah dhismo guulaysto, Ummadii khayr baa usiyaaday: Markasta oo reer burburana Bulshada waxaa usoo hoyata; dayacan caruureed, dhib waalid, khilaaf beeleed, dagaal qoys, isnac reero isjeclaa, eed iyo hadal xumo fara badan iwm.
Dr. Axmed Cabdullahi - KEYDMEDIA ONLINE